Toyota Wish 2003 (#694183) ကို Poke Ba Thi Ri ၿမိဳ့နယ္တြင... | CarsDB
Lot Number: #694183
Toyota wish HPPNK-S XS full grade
Colour. Pearl white(ပုလဲဖြူ)
အဂ်ၤင္ပါဝါ ...................1800cc 2wd
လိုင်စင် 2L/**** YGN လိုင်စင်
XS full grade. Original TV & Back camera မျဉ်းကွေး&ရှေ့ camera စီယာတိုင် valoume..
Originalရှေ့ camera & နောက် camera original မျဉ်းကွေး။
စီယာတိုင် valoume. Control နှစ်ဖက် R-L.
4 Disk Break& original alloy ပတ်လည်။ရှေ့ foglight
& AC very good.တာယာလေးလုံးgood.အဂျင်္င်ဝိုင် လဲပီး။ကားရွတ်သမျှအကုန်ပါ။အတိုက်အခိုက်ရှင်း။မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပက်သက်၍အပြည့်အဝ ကောင်းကြောင်းတာဝန်ယူပါသည်
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Arkar Min မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota Wish 2003 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။